Home Wararka Dowladda Puntland iyo Dowladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya oo shir ku yeeshay degmada...
Dowladda Puntland iyo Dowladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya oo shir ku yeeshay degmada Galdogob
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya degmada Goldogob, Wufuud ka kala socday Dowladda Puntland iyo Dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa shir ku yeeshay degmada Galdogob ee gobolka Mudug. Shirkan waxa ka qayb galay madaxda Wasaaradda Maaliyadda, Wasaaradda Ganacsiga ,maamulka gobolka Mudug iyo Hay’adaha amniga gobolka Mudug, halka dhanka DDS Itoobiya u matalaayeen Guddoomiyaha gobolka Doollo, guddoomiyayaashii degmooyink Bookh, Galxamur,Galaadi,Danood iyo hay’adaha amniga ee gobolka.
Madaxda labada dhinac ayaa si qoto dheer uga wadahadlay wadashaqeynta Amniga, ganacsiga, cashuuraha iyo xoojinta iskaashiga Puntland iyo DDS Itoobiyaiyo. Shirkan intii uu socday ayaa la isla gartay in meel looga soo wada jeesto la dagaalanka argagaxisada iyo falalka kale ee amniga labada dhinac lidka ku ah.
Ugu danbeyntii labada dhinac ayaa gabagabadiisa waxa ay soo saareen warmurtiyeed ay si wada jira ugahadlayaa chaman qodobadaii lagu wadaheshiiyay.